Istaraatijiyadaha Hagaajinta Awooda Ruuxiga ah - Akhriso Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics khadka tooska ah
Awoodda Ruuxa ee Hagaajinta Xeeladaha Celceliska 2.3 / 5 ka mid ah 3
N / A, waxay leedahay 1.5K views
Fantasy, Historical, ku maqan, Romance
Ku soo dhowow adduunka ee manhwa websaydhkayaga, waxaad ka heli kartaa webtoon-ka ugu fiican, manhwa ugu fiican, iyo sare manhua.
Waad aqrinaysaa Awoodda Ruuxa ee Hagaajinta Xeeladaha cajiib ah manhwa.
Waxaa laga yaabaa ama aadan ogeyn Manhwa, laakiin waa inaad eegtay ama akhriday manga. Marka ma ogtahay in manga ka sokow, ay jiraan sidoo kale manhua iyo manhwa (hadda loo yaqaan) webtoon)?
Hadaad ahaan jirtay akhriska Manga in cabbaar ah, hubaal waad arki doontaa Manhwa or Manhua, si kastaba ha noqotee, maxay ku kala duwan yihiin dhammaantood? Waa maxay Manhwa? Waa maxay Webtoon? Waa maxay Manhua? Maxaa loo wada yeeri waayey Manga?
Aynu baranno oo aan ogaanno faraqa u dhexeeya Manga, Manhwa, iyo Manhua nala. Aynu aqrino oo ka raadinno manhwa weyn (webtoon) boggan.
Haweeneyda hogaamisa Yue Qingtao waxay ku dhalatay asal xumo. Markii lagu qasbay inay ku noolaato dariiqa, waxay ku qaadatay guriga. Oo kii waxaas sameeyey wuxuu ahaa qof ku gartay dhowr nafood. In kasta oo uu ogaa nolosheeda oo dhan in ay leedahay shaqsiyad kala duwan hadana aan gabadhaas uu ogaa, haddana weli wuu ka caawin kari waayey in ay u dhawaato, malaha rajadii ugu dambaysay ee uu ilaalin jiray muddo dheer…
Cutubka 31	October 6, 2021
Cutubka 30	September 30, 2021
Cutubka 29	September 30, 2021
Cutubka 28	September 30, 2021
Cutubka 27	September 30, 2021
Cutubka 26	September 30, 2021
Cutubka 25	September 25, 2021
Cutubka 24	September 25, 2021
Cutubka 23	September 25, 2021
Cutubka 22	September 25, 2021
Cutubka 21	September 25, 2021
Cutubka 20	September 25, 2021
Cutubka 19	September 25, 2021
Cutubka 18	September 25, 2021
Cutubka 17	September 1, 2020
Cutubka 16	October 8, 2020
Cutubka 15	October 8, 2020
Cutubka 14	October 8, 2020
Cutubka 13	September 1, 2020
Cutubka 12	October 8, 2020
Cutubka 11	October 8, 2020
Cutubka 10	October 8, 2020
Cutubka 9	October 8, 2020
Cutubka 8	October 8, 2020
Cutubka 7	October 8, 2020
Cutubka 6	October 8, 2020
Cutubka 5	September 1, 2020
Cutubka 4	October 8, 2020
Cutubka 3	October 8, 2020
Cutubka 2	September 1, 2020
Cutubka 1	September 1, 2020
Cilmiga dhaxalka ayaa ah halkaan: xasilloonow, Amiir Iskuul!
Dhamaan wixii ilaahay ka wada
Waxaan Dhalay Ilmo Gacan ku dhiigle
Baadh Manga By
Jacaylka Wiil (40)
Jacaylka Gabdhaha (45)
Ficil toos ah (3)
Arts Martial (48)
Dhex dhexaad ah (0)
ku maqan (62)
Shaqaalaha Xafiiska (0)
Hal toogasho (8)
Falsafad ahaan (0)
Xaramka gadaal (0)
Nolosha Dugsiga (127)
Nolosha Nolosha (147)
Yaoi jilicsan (0)
Juri jilicsan (0)
Awood sare (0)
Waqtiga Safarka (0)